Shisheeyaha Maxalliga ah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Iimaanka Ciise Masiix ayaan ku raacnay, oo waxaa loo qaaday jannada xagga Ciise Masiix » (Efesos 2,6 Rajada Dadka oo dhan).
Maalin maalmaha ka mid ayaan galay maqaaxi waxaana gebi ahaanba ka maqnaa fikirradayda. Salaan la'aan anigoo si caadi ah u dhaaftay. Mid ayaa wacay: "salaan, xagee joogtaa?" Dhab ahaantii, waxaan ugu jawaabay: «Oh, hello! Waan ka xumahay, waxaan ku ahay adduunyo kale, waxaan dareemayaa sidii badh-shisheeye ». Waan qoslay. Waxaan xaqiiqsaday anigoo kafeega cabbaya inay jiraan wax badan oo run ah Masiixiyiinteenna ereyadan. Adduunkan waan ka baxsannahay.
Ciise wuxuu ka hadlayaa kaniisadda wadaadka sare, waxa aan ku akhrinaa Yooxanaa 17,16:20: "Iyagu wax aan ka ahayn dunida ayaan ka ahayn" Aayaddaaad Ciise wuxuu inoo duceynayaa: "Uma duceysto iyaga kaliya, laakiin waxaan u baryayaa kuwa iyagu iyaga ah oo dhan Way maqli doonaan ereyada aniga wayna iga rumeysan doonaan ».
Ciise isma arko innaga oo ah qayb ka mid ah dunidan oo Bawlos wuxuu sharraxay: «Waxaan nahay muwaadiniin jannada ku jira, oo waxaan samada ka rajeyneynaa Badbaadiyeheenna - Ciise Masiix Rabbiga ah» (Filiboy 3,20 Tarjumaadda New Geneva).
Taasina waa mowqifka Mu'miniinta. Kaliya ma nihin degganeyaasha dunida ee dunidan, laakiin sidoo kale waxaan nahay degganeyaasha jannada, kuwa shisheeyaha!
Markii aan sii waday inaan ka fikiro arrintaas, waxaan gartay inaynaan ahayn carruurtii Aadan, laakiin ay yihiin carruurta Ilaah oo ku dhashay Ruuxa. Waraaqdiisii ​​ugu horreysay, Butros wuxuu ku qoray: "Markale waad dhalatay. Adigana kuma lihidin waalidkaa ku siiyay nolosha dhulka; Maya, Ilaah qudhiisa ayaa nolol cusub oo weligeed ah idin siiyey isagoo eraygiisa nool iyo weligiis ah. (1 Butros 1:23 Rajada Dadka oo dhan).
Ciise wuxuu Farriintii Nikodemos ku wargaliyay kulankoodii habeennimo: «Wixii jidhka ka dhashay waa jidh; Waxa Ruuxa ka dhashaa waa ruux » (Yooxanaa 3:6).
Dabcan, midkoodna tani ma horseedi karto isla weynaan. Waxkasta oo aad ka heshid Ilaah waa inuu ku socdaa hab dhaqan u adeegsiga aadanaha aadanaha kale. Wuxuu ku siinayaa raaxo si aad dadka kale u qalbi qaboojiso. Wuxuu ku siinayaa nimco inaad u roonaato dadka kale. Wuu idin cafiyey si aad dadka kale u cafiyaan. Wuxuu kaa xoreeyay mugdiga mugdiga adduun si aad kuwa kale ugu raaci karto xornimada. Salaan diiran dhammaan shisheeyaha maxalliga ah ee halkaa jooga.